Ukuthuthuzela kwekhaya lam kumbindi we Salerno
I-Apartment esembindini wedolophu kumgangatho we-3, ebandakanya: iholo enkulu yokungena, ikhitshi, igumbi lokuhlala elinebhedi yesofa ephindwe kabini, amagumbi okulala ama-2 anebhedi ephindwe kabini, amagumbi okuhlambela ayi-2, igumbi eli-1. Amaziko orhwebo amaninzi
Indawo yokuhlala ikwindawo esembindini kakhulu kodwa kwangaxeshanye izolile kakhulu kwisitrato esisecaleni sesitalato esikhulu.
Indawo apho ifulethi ikhoyo ibonelelwa kakuhle ziivenkile ezahlukeneyo: ivenkile enkulu, ibhula, i-greengrocer, thatha ukutya, impahla yokuhlamba impahla, inwele, izinto zokubhala, icuba.Amanyathelo ambalwa ukusuka apho kukho iCawe entle yeSalesians yaseSan Giovanni Bosco enendawo enkulu yokuthetha apho kukho ibasketball, ibhola ekhatywayo kunye nebhola yevoli enokusetyenziswa nguye nabani na.
Sono una donna molto solare, mi piace tanto viaggiare per conoscere luoghi nuovi e nuove culture. Amo leggere per viaggiare con la fantasia nel meraviglioso mondo delle emozioni ma…
Ukuba kuyimfuneko kuya kubakho indawo yokubhekisela kwindawo leyo. Ndizakubakho xa kunokwenzeka ukuba ndinamkele kwaye ndikhona ukukunceda ngolwazi malunga nesixeko kunye neendawo ezisingqongileyo, kungenjalo kuya kubakho umncedisi wokungena.
Ukuba kuyimfuneko kuya kubakho indawo yokubhekisela kwindawo leyo. Ndizakubakho xa kunokwenzeka ukuba ndinamkele kwaye ndikhona ukukunceda ngolwazi malunga nesixeko kunye neendawo…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Salerno